ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့် Steele နှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများ၊ ၂၀၁၃ - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
Peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သံမဏိ et al ၏ဝေဖန်မှု။ , 2013
နောက်ခံသမိုင်း: သံမဏိ et al ။, 2013 နှင့် David Ley's တို့၏“Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲမယ့်"။
မတ်လ 6, 2013 တွင် ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလေ့လာပါ နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် အကြောင်းကို blog post: သံမဏိ et al။ , 2013 "ဟုခေါ်Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲမယ့်"။ ကနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်အဖြစ်၎င်း၏ oh-ဒါ-မှတ်မိလွယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်လွဲမှားစေသောဖြစ်ပါသည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာတင်ပြ neuroscience ။ အဲဒီအစား၊ David Ley's မတ်လ၊ ၂၀၁၃ ဘလော့ဂ်ပို့စ်သည်အမှားအယွင်းမရှိသော EEG လေ့လာမှုတစ်ခု၏စိတ်ကူးယဉ်အကောင့်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။ သံမဏိ et al။ , 2013.
Ley ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်သည်ထင်ရှား5လအတွင်း ရှေ့မှာ သံမဏိ တရားဝင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ တလအကြာ (ဧပြီ 10th) စိတ်ပညာယနေ့တွင် ၎င်း၏ unsubstantiated တောင်းဆိုမှုများနှင့်အခြားမည်သူမဆိုမှသူမ၏အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာမှုပေးအပ်ဖို့ Prause ရဲ့ငြင်းဆန်ပတျဝနျးကငျြအငြင်းပွားစရာများမှအယ်ဒီတာများအတည်မပြုရသေးသော Ley ရဲ့ blog post: ။ အဆိုပါနေ့က သံမဏိ et al ။ , နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်ကျယ်ပြန့်စာနယ်ဇင်းအများပြည်သူသွား။ Ley သည်သူ၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည် လီသည်သူ၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်၏ရက်စွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မှတ်ချက်များကိုပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။Update ကို, 2019: ဒါဝိဒ်သည် Ley ယခုယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး xHamster နေဖြင့်လျော်ကြေးငွေခံရနေပါသည်!).
Prause ရဲ့ဂရုတစိုက်ကြိုးကိုင် PR စနစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလိင်စွဲ debunked ခဲ့ဟုဆိုကာအပေါငျးတို့သခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကမီဒီယာလွှမ်းခြုံမှု (!) ။ တွင် တီဗီအင်တာဗျူး နှင့်ထဲမှာ UCLA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နီကိုးလ် Prause သူမ၏ EEG လေ့လာမှုအကြောင်းကိုနှစ်ခုလုံးလုံးမထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများကိုဖန်ဆင်း:
ဘာသာရပ်များ '' ဦးနှောက်ကတခြားစွဲတူသောကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။
Hypersexuality (လိင်စွဲ) အကောင်းဆုံးအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နေပါတယ် "မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ။ "
သူတို့အားတွေ့ရှိချက်မအတွက်တကယ်ရှိပါတယ် သံမဏိ et al ။ 2013. တကယ်တော့ဒီလေ့လာမှုကနီကိုးလ်ပရာ့စ်နဲ့ဒေးဗစ်လိုင်တို့ပြောခဲ့တာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်:
ဘာ သံမဏိ et al။ , 2013 အမှန်တကယ်၎င်း၏ "အာရုံကြောတွေ့ရှိချက်" အဖြစ်ဖော်ပြထား:
"P300 သာယာသော - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေအဘို့အလွှဲခွင်ဆိုလိုသည် ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ မနှစ်မြို့ဖွယ်ကောင်းသောအရာနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာမဟုတ်သောအခြေအနေများထက်
ဘာသာပြန်ချက်: မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေပိုမို cue-reactivity ကို (ပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်) ရှိခဲ့ ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးစွဲဆက်စပ်တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါဖြစ်ပေါ်သောအရာကိုအဖြစ်အတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် သူတို့၏ စွဲလမ်း။
ဘာ သံမဏိ et al။ , 2013 အမှန်တကယ်၎င်း၏ "လိင်ဆန္ဒ" တွေ့ရှိချက်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်
"ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုမှဆွေမျိုးသာယာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှပိုကြီးသော P300 လွှဲခွင်ကွဲပြားမှု, ခဲ့ပါသည် အနုတ်လက္ခဏာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သောဒါပေမယ့်မရ hypersexuality ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သော။ "
ဘာသာပြန်ချက်: အနုတ်လက္ခဏာ အနိမ့်အလိုဆန္ဒ. porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီခဲ့ အနိမ့် လက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည် (သို့သော် masturbate မှအလိုဆန္ဒကိုလျှော့ချမပါ) ။ အခြားသောလမ်းထားရန် - porn ပိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်မတရားသောနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate မှပိုမိုနှစ်သက်သည်။
အတူတူအဲဒီနှစျခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များအရ (ရုပ်ပုံများကို) ကြည့်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားသည်၊ သို့သော်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကို (လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) တုံ့ပြန်မှုနည်းသည်။ နှစ် ဦး စလုံး sensitization နှင့် desensitization နှစ် ဦး စလုံးညွှန်ပြတစ်ခုစွဲ၏အမာခံများဖြစ်ကြသည်။
သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းရှစ်ခုသည်နောက်ပိုင်းတွင်အမှန်တရား (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့စဉ်သူမ၏မှားယွင်းစွာတင်ပြချက်များအတွက် Prause ကိုပထမဆုံးခေါ်ယူခဲ့သည် အကြီးတန်းစိတ်ပညာပါမောက္ခဂုဏ်ထူးဆောင်ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်။ အဆိုပါအောက်မှာမှတ်ချက် စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး ဂျွန်အေဂျွန်ဆင်သည်အမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
"ကြှနျတေျာ့စိတျထဲနေဆဲသူမသည်လိင်ကိစ္စပုံရိပ်တွေအဘို့အမြင့်မား P300 ဖတ်သတင်းပေးပို့ကြောင်းပေးထား, ဦးနှောက်ဟာသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်သူမ၏ဘာသာရပ်များ '' မူးယစ်ဆေးစွဲတူသောဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး '' ကြောင်းဆိုကြသည်အဆိုပါ Prause မှာရှုတ်စရာပါတယ်။ ရုံရွေးချယ်မှုဟာသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါ P300 spikes ပြသသူကိုစွဲလိုပဲ။ သူမည်သို့အမှန်တကယ်ရလဒ်ဆန့်ကျင်ဘက်သောကောက်ချက်ဆွဲနိုင်မည်နည်း ငါကသူမ၏စေတယ်-အဘယ်အရာကိုသူမရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ "
Mustanski "? လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ခဲ့တာအဘယျ", မေးတယ်ပြီးတော့ Prause ပြန်ကြား, "ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများ [အွန်လိုင်း erotica ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိနှင့်အတူပြဿနာများ] သတင်းပို့သူတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကနေအခြားအစွဲများကဲ့သို့ကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ "
သို့သော်လေ့လာမှုပူပန်ခြင်းထဲကနေလျှင်ဦးနှောက်ကိုတုံ့ပြန်မှုကြည့်ရှုရန်သိသာလမ်းဖြစ်ရပြီလို non-စှဲလမျးသူထိန်းချုပ်အုပ်စုထံမှမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အသံသွင်းရာမှဦးနှောက်အသံသွင်းအွန်လိုင်း erotica ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများရှိခြင်းပုဂ္ဂိုလ်များထံမှဦးနှောက်အသံသွင်းနှိုင်းယှဉ်မရ အုပ်စုတစုကိုပိုပြီးဦးနှောက်စွဲ၏တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ် Non-စွဲတူသောကြည့်ရှုပါ။
အဲဒီအစား, Prause မိမိတို့၏အတွင်း-ဘာသာရပ်ဒီဇိုင်းသုတေသနဘာသာရပ်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်အစေခံဘယ်မှာပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီဒီဇိုင်းနှင့်အတူသူတို့ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုမိမိတို့ဘာသာရပ်များ (အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်) ၏ EEG တုံ့ပြန်မှုဓါတ်ပုံတွေကိုတခြားမျိုး၎င်းတို့၏ EEG တုံ့ပြန်မှုထက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် (အချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဂရပ်ဟာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆောင်းပါးအတွက်အမှန်တကယ်ဂရပ်ကနေသိသိသာသာကွာခြားပေမယ့်) က inline waveform ဂရပ်မှာပြနေသည်။
ဒီတော့ဒုက္ခအွန်လိုင်း erotica ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိရှိခြင်းသတင်းပေးပို့သူကိုဤအုပ်စုဓါတ်ပုံတွေကိုတခြားမျိုးထက်ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်း EEG တုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တင်ပြသည့်အခါအလားတူပြင်းထန်သော EEG တုံ့ပြန်မှုကိုပြသပါသလား။ ငါတို့မသိဘူး ပုံမှန်, အဘယ်သူမျှမစွဲသူများသည် erotica မှပြedနာအုပ်စုကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုပြသပါသလား တနည်းကား၊ ဤ EEG ပုံစံသည်စွဲလမ်းသူများသို့မဟုတ်မစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ပုံစံနှင့် ပို၍ ဆင်တူသည်မရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
Prause သုတေသနအဖွဲ့သည်သူတို့၏ဘာသာရပ်များအား erotica သို့မြင့်မားသော EEG တုံ့ပြန်မှုသည်စွဲလမ်းစေသည့် ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုလားသို့မဟုတ်မြင့်မားသော libido ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုဟုတ်မဟုတ်ကိုသရုပ်ပြနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။ သို့သော် EEG တုံ့ပြန်မှုတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုရှင်းပြခြင်းသည်အုပ်စုတစ်ခုလုံး၏တုံ့ပြန်မှုသည်စွဲလမ်းနေပုံရှိ၊ မရှိဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘေးဖယ်စာနယ်ဇင်းများတွင်အများအပြားကလက်ခံတောင်းဆိုမှုများအနေကြောင့်နှောင့်ယှက်မယ့် သံမဏိ et al ။ အဲဒါကိုအလေးအနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရအဖြစ်, peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်: 1) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ); 2) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲအဘို့အပြမရ; 3) လေ့လာမှုခဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု; 4) မေးခွန်းခဲ့ကြသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲဘို့အတည်ပြုမပေး (ဒါ့အပြင်ဒီကိုကြည့်ပါ ပတျဝနျးကငျြယင်းတောင်းဆိုမှုများတစ်ဦးပြည့်စုံတည်ဆောက်မှုများအတွက်ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။ , 2013).
ငါတို့ရမှီ ရှစ် ၏သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း သံမဏိ et al ။ , 2013 ခုနှစ်ငါ သုတေသန၏ပြည်နယ် 2020 အတွက်:
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 55 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်အားလုံးသည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 33 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကို? ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုများကိုရှင်းလင်းဖော်ပြသည့် Prause နှင့် Ley ကိုထောက်ခံမှုမရှိသောစကားပြောမှုကိုပြသသည် - လေ့လာမှု ၂၅ ခုကျော်ကလိင်နှင့် porn စွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းစေသည်
ရှစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း သံမဏိ et al ။ , 2013
ကွားနှစ်ပေါင်းကျော် အများကြီးပိုပြီး neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူတို့တွေ့ရှိချက်များသည်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်သူတို့အားလုံးသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုခိုင်မာသည့်အထောက်အပံ့များပေးသည်။ ညစ်ညမ်း / လိင်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုဤစာရင်းတွင်တွေ့နိုင်သည် 30 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် (အပေါငျးတို့သစွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့) ။
သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းခုနစ်ခုဘာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည် သံမဏိ et al ။ ၂၀၁၃ အမှန်တကယ်အစီရင်ခံခဲ့သည် - Prause သည်သူမ၏ PR စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အားလုံးဘယ်လိုဖော်ပြသည် သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးငှားရမည်။ အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများကို YBOP ဝေဖန်မှုနှင့်အတူ alignment ကို၌ရှိကြ၏။ အဆိုပါစာတမ်းများသုံးခုကိုလည်းလေ့လာမှုရဲ့ချို့ယွင်းချက်နည်းစနစ်များနှင့် unsubstantiated ကောက်ချက်ကိုဖော်ပြရန်။ စက္ကူ #1 ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာကျိန် ဆို. ပူဇော်ဖြစ်ပါသည် သံမဏိ et al ။, 2013 ။ စာတမ်းများ 2-8 ခွဲခြားစိတ်ဖြာကဏ္ဍများဆံ့ သံမဏိ et al ။, 2013 ။ သူတို့ကစာအုပျ၏နေ့စွဲဖြင့်စာရင်းပြုစုထားရှိပါသည်:
1) '' အမြင့် Desire 'သို့မဟုတ်' ရုံ '' တစ်ဦးစွဲ? မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန် သံမဏိ et al ။ Donald L. ဟီလ်တန်, ဂျူနီယာ, MD ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (2014)
အငြင်းအခုံ၏တရားဝင်မှုက၎င်း၏ဝုဏ်၏ကျန်းမာခြင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သံမဏိ et al အားဖြင့်မကြာသေးမီစက္ကူခုနှစ်တွင်။ , ကောက်ချက် '' အလိုဆန္ဒ 'နဲ့' စွဲ '' နှင့်စပ်လျဉ်းအဓိပ္ပာယ်များ၏ကနဦးဆောက်လုပ်ရေးအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ဤရွေ့ကားအဓိပ္ပာယ်ယူဆချက်နှင့်အရည်အချင်းများ, ပိုင်းတွင်စာရေးသူများကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့၏န့်အသတ်တစ်ခုစီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီး, ဒါပေမယ့်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်စာရေးသူအောင်ကုမ္ပဏီကောက်ရောက်ရှိအတွက်လျစ်လျူရှုနေကြပါတယ်။ သို့သျောလညျးဤကောက်ချက်များ၏ကုမ္ပဏီများသဘောတရားပြဿနာကနဦးဝုဏ်၏ရလဒ်အဖြစ်ဒါပေမယ့်လည်းပြဿနာနည်းစနစ်ကြောင့်မသာ, ဝရမ်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ, '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ '' ၏အယူအဆစဉ်းစားပါ။ ပထမဦးဆုံးအပိုဒ် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တသမတ်တည်းစညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ရမည် '' ကအသိအမှတ်ပြုများနှင့်တရားမဝင် (pedophilia) သို့မဟုတ်မသင့်လျော် (ဖောက်ပြန်) လာသောအခါဖြစ်စေထိန်းချုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအပိုဒ်ဟူသောဝေါဟာရကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ '' နှုန်း se တစ်ဦးပြဿနာ entity ကိုဖော်ပြရန်ဒါပေမယ့်မျှသာအလိုဆန္ဒ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ဖော်ပြမထားဘူးသောအခြနှင့်အတူအဆုံးသတ်ထားသည်။
နောက်အပိုဒ်တွင် Winters et al ။ ၏စာတမ်းသည် 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပြင်းပြခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအတွေးများ၊ ခံစားချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုမြင့်မားစွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်သောကရောက်စေခြင်းသာဖြစ်သည်' ဟုအကြံပြုထားသော Winters et al ။ ၏စာတမ်းကိုကိုးကားထားသည်။ (Winters, Christoff) , & Gorzalka, 2010) ။ ထိုသို့သံမဏိ et al သည်ဤယူဆချက်အပေါ်အခြေခံသည်။ ထို့နောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ '' အလိုဆန္ဒ '' ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ဆက်စပ်ဒီ 'ဒုက္ခဆင်းရဲ' 'များအတွက်ရောဂါမော်ဒယ်မေးခွန်းထုတ်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်။ ကွဲပြားခြားနားသော '' အလိုဆန္ဒ '' တင်းပလိတ်များတစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘို့, သားသမီးအတွက်ကြည့်ရှုရုပ်မြင်သံကြားဥပမာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ : ဤအပိုဒ်အတွက်နောက်ဆုံးနှစ်ခုစာကြောင်းများစက္ကူ၏ကျန်ပြီးတော့သက်သေပြဖို့ကြိုးစားပါတယ်သောအဓိကအကြောင်းရင်းတည်ထောင်ရန်
ကုသမှုများသည်တီဗွီစွဲခြင်းကဲ့သို့သောရောဂါထပ်မံမပါဘဲရုပ်မြင်သံကြားကိုအမူအကျင့်ဖြင့်ကြည့်ရှုသည့်နာရီအရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ထိရောက်မှုရှိရန်အဓိကထားသည်။ ဤအရာသည်အဆိုပြုထားသောရောဂါပုံစံသည်မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒထက် ကျော်လွန်၍ ရှင်းပြနိုင်သောစွမ်းအားကိုမထည့်သွင်းပါကအလားတူချဉ်းကပ်မှုသည်မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်သင့်လျော်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ (Steele, Staley, Fong, & Prause, 2013)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ကလေးများနှင့်လိင်အဘို့အလိုဆန္ဒအတွက်တီဗီကြည့်ဖို့အလိုဆန္ဒ၏အကြောင်း, ဒီနှိုင်းယှဉ်ပေါ်အခြေခံပြီး, စာရေးသူ, ထို့နောက်ရလဒျမြားနှငျ့ဆှေးနှေးရသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ (ERPs) အပေါ်တစ်ဦးဆွေးနွေးမှုနှင့်သူတို့၏လေ့လာမှုပုံစံဒီဇိုင်းတစ်ခုနောက်ဆက်တွဲဖော်ပြချက်သို့ဖြန့်ချိ အောက်ပါအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာအထှတျအထိ:
မေးခွန်းဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်နိဂုံးချုပ်မှာတော့အလားတူလှုံ့ဆော်မှု၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိမယ့်နမူနာအစီရင်ခံပြဿနာများအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြော reactivity ကို၏ပထမဦးဆုံးအတိုင်းအတာ, ရောဂါဗေဒ hypersexuality ၏မော်ဒယ်များအထောက်အပံ့ပေးရန်ပျက်ကွက်။ အထူးသ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများအကြား P300 window တွင်ခြားနားချက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအသုံးပြုပုံသော်လည်းမ hypersexuality ၏ (သုံး) မဆိုအတိုင်းအတာအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ (သံမဏိ et al ။ , 2013)
ဒီကြေညာချက်နှင့်အတူစာရေးသူမအကျိုးဆက်အရေး, အမြင့်ဆုံးဆန္ဒကတွေ့ကြုံခံစားသောသူတို့အားပြဿနာဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင်, ရောဂါဗေဒမဟုတ်ကြောင်းဝုဏ်ရှေ့ဆက်ထားတော်မူ၏။
အခြားသူများကိုဤလေ့လာမှု၏သိသာထင်ရှားသောန့်အသတ်ဖော်ပြထားပါပြီ။ ဥပမာ, စာရေးဆရာနီကိုးလ် Prause ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏လေ့လာရေး, အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရုပ်ပုံများကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတသမတ်တည်းပုံစံကိုပြသကြပါပြီ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတွေကို၌တူညီသောပုံစံကိုတွေ့မြင်သင့်ကြောင်းခန့်မှန်း 'အင်တာဗျူးတွင်ဖော်ပြထား လိင်နှင့်အတူအစီရင်ခံစာပြဿနာတွေကတကယ်တော့တစ်ဦးစွဲ '' ခဲ့လျှင်။ ယောဟနျသဂျွန်ဆင် Dunning et al ၏ဤအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအများအပြားအရေးပါသောကိစ္စများထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ (2011) စက္ကူသူမကသံမဏိ et al နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အခြေခံအဖြစ်ကိုးကား။ စက္ကူ။ ပထမဦးစွာ Dunning et al ။ abstinent ကိုကင်းသုံးစွဲသူများလက်ရှိသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှု: စက္ကူသုံးထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သံမဏိ et al ။ စက္ကူမဆိုမျိုးမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ, Dunning et al ။ စက္ကူစောစောရွေးချယ်အာရုံကိုထင်ဟပ်ဖို့ထင်အစောပိုင်း posterior အဆိုးမြင်စိတ်တွေ (EPN), နှင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာ (LPP) အပါအဝင်ဦးနှောက်ထဲမှာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော ERPs, တိုင်းတာ motivationally သိသိသာသာပစ္စည်းနောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားမိတယ်။ ထို့ပြင် Dunning လေ့လာမှုစဉ်ဆက်မပြတ်အပြောင်းအလဲနဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ထင်, အ LPP ၏အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားပါသေးသည်။ ထို့အပြင် Dunning et al ။ ဤမတူညီသော abstinent အတွက် ERPs လက်ရှိသုံးပြီးကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအကြားခွဲခြားစက္ကူ။ သံမဏိ et al ။ စက္ကူ, သို့သော်, သာ Dunning အဆိုပါ LLP ၏အစောပိုင်းဝင်းဒိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့တဦးတည်း ERP သည် p300 မှာကြည့်ရှုကြ၏။ သံမဏိ et al ။ စာရေးသူပင်ဒီဇိုင်း၌ဤအရေးပါသောအားနည်းချက်အသိအမှတ်ပြု: 'နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေဟာ p300 လိင်လှုံ့ဆျောမှုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုသိရှိနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာမပေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနည်းငယ်အကြာတွင် LPP ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် '' လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ပုံရသည်။ သံမဏိ et al ။ သူတို့တကယ်တော့အတွက် Dunning et al ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဝန်ခံ။ လေ့လာမှုသေးသူတို့ရဲ့ကောက်ချက်ထိရောက်စွာထိုကဲ့သို့သောနှိုင်းယှဉ်ပါစေ။ သံမဏိ et al နှင့်စပ်လျဉ်း။ လေ့လာမှု, ဂျွန်ဆင်, အကျဉ်းချုပ် '' အဆိုပါတစ်ခုတည်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာတွေ့ရှိချက်စွဲအကြောင်းကိုဘာမျှကပြောပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ဒီသိသာတွေ့ရှိချက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အနုတ် P300 လွှဲခွင်နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းညွှန်ပြ P0.33 နှင့် (r = -300) တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒအကြားဆက်စပ်မှု, အနိမ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ဒီကိုတိုက်ရိုက်အဖြစ် P300 ၏အနက်ကိုဆန့်ကျင် မြင့်သော အလိုဆန္ဒ။ အခြားအစှဲလမျးသူအုပ်စုများမှမနှိုင်းယှဉ်ရှိပါတယ်။ အုပ်စုများကိုထိန်းချုပ်ရန်မနှိုင်းယှဉ်ရှိပါတယ်။ သုတေသီများကရေးဆွဲအဆိုပါကောက်ချက်, ဒုက္ခလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိသတင်းပို့သူတွေကိုရှိသည်သို့မဟုတ်ဦးနှောက်ကိုကင်းအလားတူတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်စွဲတခြားမျိုး '(ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမပြောပါသောအချက်အလက်များ, ကနေကွမ်တမ်ခုန်ဖြစ်ကြသည် ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်, Ph.D, 2013) ။
ဒီလေ့လာမှုဒီဇိုင်းအခြားလေးနက်ချို့တဲ့ကာလုံလောက်သောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု၏မရှိခြင်း, လေ့လာမှုနမူနာများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်း, သှေးနှင့် quantitative ခွဲခြားမှုနှင့် '' မျှသာမြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ 'နှင့်ရောဂါဗေဒအကြားခွဲခြားဖို့ P300 များ၏စွမ်းရည်များကန့်သတ်မှုကိုနားလည်ရန်ပျက်ကွက်ပါဝင်သည်ပေမယ့် မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, ဖြစ်ကောင်းအခြေခံအကျဆုံးအားနည်းချက်ဟူသောဝေါဟာရကို '' အလိုဆန္ဒ '' ၏အသုံးပြုမှုနှင့်နားလည်မှုမှပြောပြတယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေပလက်ဖောင်းဆောက်လုပ်ထဲမှာ, စာရေးဆရာများနှုတ်ကပတ်တော်ကို '' မျှသာ '' နှင့်အတူအလိုဆန္ဒ၏အယူအဆ minimize ကြောင်းရှင်းပါတယ်။ အလိုဆန္ဒ, လိင်များ၏အခြေအနေတွင်ဇီဝစနစ်များမှဆက်စပ်အဖြစ်, telencephalic သိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်စကားရပ်နှင့်အတူ mesencephalic dopaminergic drive ကိုတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တစ်ဦး primal salience အချက်အဖြစ်, dopamine ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်သည့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သစ်ပင် (Pfaus အတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု၏, 2010) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ပုံစံနှင့်ဖော်ပြမှုနှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောမျိုးဗီဇများကို phyla တွင်တွေ့မြင်ရပြီးအပြန်အလှန်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလိင်၊ အစားအစာရှာဖွေခြင်းနှင့်အခြားအပြုအမူများအကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနေသော်လည်းဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအရ 'အလိုဆန္ဒ' မှထွက်ပေါ်လာသောမော်လီကျူးစက်ယန္တရားတွင်တူညီမှုများရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယခုသိရှိကြသည်။ ဤရွေ့ကားယန္တရားများကိုလေ့လာသင်ယူရန်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုနှင့် modulating ပုံစံဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Hebb ၏ဥပဒေအရ '' အတူတကွလောင်ကျွမ်းနေသောအာရုံကြောများအတူတကွကြိုးကိုင် '' ဖော်ပြထားသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောအစောပိုင်းလေ့လာမှုများမှဆုလာဘ်များသင်ယူခြင်းနှင့်အတူဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့် ဦး နှောက်၏စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိခဲ့ကြပြီးယခုတွင်လိင်နှင့်ဆားတပ်မက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကွဲပြားသောထင်ရသောသဘာဝအလိုဆန္ဒများနှင့်အတူအာရုံခံဆိုင်ရာဆုလာဘ်အခြေပြုလေ့လာမှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
အလိုဆန္ဒနှင့်စပ်လျဉ်း definitions ကဒီမှာအရေးကြီးလှသည်; ကျနော်တို့ကမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့် relapse စပ်လျဉ်းစာပေများတွင်အသုံးပြုသည်အဖြစ်ကပိုနိမိတျဆိုးသက်ရောက်မှုရှိသည် '' တဏှာ '' စဉ်းစားပါသော်လည်းဇီဝ salience, သို့မဟုတ် 'လို' ', တဦးတည်းအရာဖြစ်၏။ အိုး et al (အာရုံခံဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအသစ်ပြန်ပြုပြင်နှင့် Arbore ပတျသကျတဲ့ neuroplastic ဖြစ်စဉ်ကို - satiation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဆင်းရဲချို့တဲ့အတူ - သက်သေအထောက်အထားစွဲလမ်းပြည်နယ်များထိုကဲ့သို့သောဆားနဲ့လိင် invoke အဖြစ်ဇီဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များကိုအဘို့အစားချင်စပ်လျဉ်းကြောင်းပြသသည်။ 2010; Roitman et al ။ , 2002) ။ အထူးသ, တစ်ဦးကိုအပူတပြင်းအလိုဆန္ဒထိုကဲ့သို့သောသေခြင်းတရားဝစှာကြှေးနှင့်ရှောင်ရှားရန်တိရစ္ဆာန် induces ထားတဲ့ဆားချို့တဲ့, အဖြစ်သက်ရှိများ၏ဖြစ်နိုင်ချေသေခြင်းတရားနိမိတျကြောင်းအခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်ပြည်နယ်များစွဲလမ်းနေဖြင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ လူသားတွေအတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲ, စိတ်ဝင်စားစရာသေမင်း၏အန္တရာယ်, ဒီကို elemental drive ကိုတစ်ခုပြောင်းပြန်လှန်၏ကြားမှဝစှာကြှေးဖို့အလားတူအဆင်မပြေမှုမှအဓိကဦးဆောင်နေတဲ့နှိုင်းယှဉ်တဏှာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အလားတူဖြစ်စဉ်လေးလည်းတစ်ဦးမွငျ့မားဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေသော်လည်းနေကြလို့ပဲအဝလွန်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောနှလုံးရောဂါမြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာလောင်ဆက်လက်ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်သူစိမ်းနဲ့အတူကျပန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆက်လက်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူတဦးတည်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်အဖြစ်ကောင်းစွာသဘာဝအစှဲနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ထိုကဲ့သို့သော HIV နှင့်အသည်းရောင်အသားဝါဘီအဖြစ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ။ ဒီတဏှာ conundrum ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်ပြကက်စကိတ်မောင်းအစုံမူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်သဘာမတရားသော၏အခြေခံအကျဆုံးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တူညီဖြစ်ကြောင်းဗီဇ, ဆား, စွဲလမ်းများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ (Liedtke et al usurping တစ်ဦးပြန်ပေးဆွဲထောက်ခံပါတယ်။ , 2011) ။ ငါတို့သည်လည်းပိုကောင်းမျိုးရိုးဗီဇမော်လီကျူး switches များ, ထုတ်ကုန်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သော DeltaFosB, orexin, Cdk5, အာရုံကြော plasticity ထိန်းညှိလှုပ်ရှားမှု-စညျးမဉျြးစညျးကမျး cytoskeleton-ဆက်စပ်ပရိုတင်း (ARC), striatally သန့်စင်ပရိုတိန်း tyrosine phosphatase (အဖြစ် modulator တွေကိုပါဝင်ပတ်သက်နေသူနဲ့ဆက်စပ်ပုံကိုရှုပ်ထွေးစနစ်များကိုနားလည်နှင့်ဤပွောငျးလဲ အဆင့်), နှင့်အခြားသူများ။ ဤရွေ့ကားအဖွဲ့အစည်းများအာရုံကြောသင်ယူမှုဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်ရှုပ်ထွေးသောအချက်ပြအဆငျ့ဆငျ့, ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ကျွန်တော် '' တဏှာ ', သို့မဟုတ်အလွန်' 'မြင့်သောအလိုဆန္ဒ' 'အဖြစ်ကိုထိခိုက်တွေ့ကြုံခံစားဘယ်အရာကိုမှမှန်းချက်ရဲ့အရာ mesencephalic နှင့် hypothalamic တွန်းအားတစ်ခုထုတ်ကုန်အတွက်ပါဝင်နှင့်သတိနှင့်သတိလစ်သတင်းအချက်အလက်၏ဤဆုံကနေရရှိလာတဲ့ cortical အပြောင်းအလဲနဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏မကြာသေးမီ PNAS စက္ကူအတွက်သရုပ်ပြအဖြစ်, အဆိုပါသဘာတဏှာပြည်နယ်များ (Liedtke et al '' ဖွယ်ရှိခေတ်ပြိုင် hedonic အလိုလိုကျလှနျးခွငျး၏ဆန္ဒပြည့်အားဖြင့်မြင့်မားသောရှင်သန်မှုတန်ဖိုးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှေးခေတ်စနစ်များ usurping ရောင်ပြန်ဟပ် '' ။ , 2011, PNAS), ကြောင်းငါတို့သည်ထိုအတူညီဆား '' တဏှာ '' ဗီဇအစုံယခင်ကကင်းနှင့် opiate စွဲနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ 'အလိုဆန္ဒ' '၏သိမြင်မှုစကားရပ်သည်ဆုလာဘ်ရတဲ့အပေါ်ဒီအာရုံ, တဖန် satiation တွေ့ကြုံခံစားရန်' 'တဏှာ' ကို mesencephalic / hypothalamic ဝင်ရိုးထဲမှတစ်ဦးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုင်နှင့် phyolgenetically စရိုက် drive ကိုတစ်ဦးမသိ '' cortical '' ဆိုသည့်စကားရပ်ပေမယ်။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာသောအခါ - - ကပုန်ကန်တတ်သောအမျိုးနှင့်ရလဒ်များသည့်အခါတစ်ဦးအကျိုးသည်အဖျက်တဏှာ, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ neurobiological ဆံပင်ခွဲနဲ့ 'မျှသာ' 'မြင့်သောအလိုဆန္ဒထက်စွဲက terms သလဲ?
အခြားပြissueနာမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဘယ်တော့မှအဆိုပါသံမဏိ et al ၌တည်၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များအဘယ်ကြောင့် 'မြင့်မားသောဆန္ဒ' ရှိရသနည်းဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်စာတမ်းတစ်စောင်သာရှိသည်။ သူတို့သည်ထိုနည်းအတိုင်းမွေးဖွားလာကြသလော။ လိုချင်သောဆန္ဒနှင့်အရည်အသွေးရောအရည်အသွေးရောပတ်ဝန်းကျင်၏အခန်းကဏ္မည်သို့ရှိသနည်း။ အနည်းဆုံးဒီသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောလေ့လာမှုလူ ဦး ရေအချို့အတွက်သင်ယူမှုအလိုဆန္ဒအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သလား? (ဟော့ဖ်မန်း & Safron, 2012) ။ ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ စာရေးသူ၏ရှုထောင့်သည်ဆယ်လူလာနှင့်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအဆင့်ဆင့်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်မော်ဂျူလာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားမလည်ပါ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသင်ယူမှုနှင့်တွေ့မြင်ရသည့်ဤအဏုဇီဝဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများသည်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ များစွာသောလေ့လာမှုများကပလတ်စတစ်၏အရေးပါမှုကိုအတည်ပြုသည်။ လူအများစုက 'ဦး နှောက်ကွန်ရက်များပြောင်းလဲခြင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကာလများ၌သာဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ ခေတ်သစ်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာသည်အမြဲတမ်းပလတ်စတစ် ဦး နှောက်၏အတွေးအခေါ်ကိုလက်ခံသည်' (Draganski & May, 2008); 'လူ့ ဦး နှောက်ပုံရိပ်သည်သင်ယူခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသောမီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင်အပိုင်းတွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သင်ယူခြင်းသည် ဦး နှောက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုသင်ယူသည်' (Zatorre, Field, & Johansen-Berg, 2012).
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စာရေးသူ၏မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုဟူသောဝေါဟာရကိုထပ်မံစဉ်းစားပါ။ Georgiadis (2012) မကြာသေးမီက striatum လမ်းကြောင်းမှဤ midbrain အတွက်လူသားများအတွက်ဗဟို dopaminergic အခန်းကဏ္ suggested အကြံပြုခဲ့သည်။ သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများအနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအော်ဂဇင်တွင် striatum တွင် dopamine spike အမြင့်ဆုံးပါဝင်သည်။ အခြေခံအဆင့် ၂၀၀% အထိရှိသည် (Fiorino & Phillips, 1997), မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သော (Di Chiara & Imperato, 1988) စမ်းသပ်မော်ဒယ်များ၌တည်၏။ , trivialize minimize နှင့် compulsive လိင်က de-pathologize မှလူ့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အီဗိုလူးရှင်းအတွက်လိင်၏ဗဟိုဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍနားလည်ရန်ပျက်ကွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကမွေးရာပါမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများနှင့်ဖြစ်စေသှေးသို့မဟုတ် quantitative ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ချေကနေထူးခြားကိုယ်ခံစွမ်းအားအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒညောသောကြောင့်ယခုလက်ရှိဆုလာဘ်မှ neuroscience တစ်ဦးကိုလက်ခံနားလည်မှုသည်အဘယ်အရာနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးnaivetéပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ ပို. ပင်ပြင်းထန်စွာသို့သော်အဖြစ်သံမဏိ et al နေဖြင့်ရုပ်ပြ။ စက္ကူကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမလိုချင်တဲ့နှင့်အဖျက်အပြုအမူအတွက်ရလဒ်များအခါ, '' မျှသာ '' တစ်ဦးစွဲဖြစ်ပါတယ်, ဒီ myopic တရားသေအယူဝါဒမှ neuroscience ယခု '' မြင့်သောအလိုဆန္ဒ '' ကိုကိုပြောပြကြောင်းအမှန်တရားနားမလည်သော်လည်းမအောင်မြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1988;85(14): 5274-5278 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အရွယ်ရောက်သူလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Draganski B ကိုမေလအေသင်တန်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2008;192(1): 137-142 ။ [PubMed]
et al Dunning ဂျေ P ကို, Parvaz အမ်တစ်ဦးက, Hajcak, G, Maloney T က, Alia-Klein N ကို, Woicik P. တစ်ဦး။ ကိုကင်းနှင့်အ abstinent နှင့်လက်ရှိကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုမှလှုံ့ဆော်မှုအာရုံစူးစိုက်မှုကို: တစ်ခုက ERP လေ့လာမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2011;33(9): 1716-1723 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fiorino ဃက F, နျူကလိယအတွက် Phillips က AG က Dynamic အပြောင်းအလဲများကိုအထီးကြွက်များတွင် Coolidge Effect စဉ်အတွင်း dopamine efflux accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1997;17(12): 4849-4855 ။ [PubMed]
Georgiadis JR ကြောင့်ပွုလုပျခွငျး ... ရိုင်း? လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းနှောက် cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတွင်။ Socioaffective အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ။ 2012;2: 17337 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဟော့ဖ်မန်း H ကို, 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူများ၏အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် Origins' ဖို့ Safron အေမိတ်ဆက်အယ်ဒီတာ့အာဘော် Socioaffective အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ။ 2012;2: 17415 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Liedtke ဒဗလျူ B, McKinley အမ်ဂျေ, et al Walker ကအယ်လ် L ကို, Zhang က H ကို, Pfenning အေ R ကို, Drago J ကို။ တစ်ဦးဂန္ဗီဇ, ဆိုဒီယမ်အစာစားချင်စိတ်များကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်ဆန္ဒပြည့် subserving hypothalamic ဗီဇအပြောင်းအလဲများမှစွဲမျိုးဗီဇ၏ဆက်ဆံရေး။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2011;108(30): 12509-12514 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pfaus JG Dopamine: ကူညီပေးခြင်းအထီးကအနည်းဆုံး 200 သန်းနှစ်ပေါင်း copulate ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2010;124(6): 877-880 ။ [PubMed]
အိုး K. K ကို Balfour အမ်အီး, Lehman အမ် N ကို, Richtand N. M က, ယု L ကို, Coolen LM Neuroplasticity သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic စနစ်။ ဟားဗတ်။ 2010;67: 872-879 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Roitman အမ်က F, Na E ကို, အန်ဒါဆင်, G, ဂျုံးစ်တီတစ်ဦးကတစ်ဦးကိုဆားအစာစားချင်စိတ်များ Berstein IL induction နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲနှင့်စိတ်ကြွဆေးမှကြွက်များ sensitizes ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002;22(11): RC225: 1-5 ။ [PubMed]
သံမဏိ V. R ကို, Staley ကို C, Fong သည် T-, Prause N. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ Socioaffective အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ။ 2013;3: 20770 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆောင်းရာသီ J ကို, Christoff K ကို Gorzalka BB Dysregulated လိင်နှင့်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ: ထူးခြားသော Construction? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2010;39(5): 1029-1043 ။ [PubMed]
Zatorre R. ဂျေ, ဖျော်ဖြေမှု R. : D, Johansen-Berg ကအိပ်ချ်ပလပ်စတစ်မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင်: သင်ယူနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများ Neuroimaging ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2012;15: 528-536 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2) နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
ကောက်နုတ်ချက်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al။ , 2013 (ကိုးကား 25 သံမဏိ et al ဖြစ်ပါသည်။ )
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating CSB ဘာသာရပ်များအတွက် P300 အပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမှတူညီရှိစေခြင်းငှါအရာ, dACC လှုပ်ရှားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထင်ဟပ်အကြံပြု ။ ဒီယခင်လေ့လာမှုတစ်ခုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသော်လည်းကျနော်တို့ CSB အုပ်စုတစ်စုနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြားခြားနားချက်များကိုပြ။ CSB အတွက်ယခင်မြေားကိုပျံ့နှံ့ MRI နှင့် P300 အာရုံစိုက်နှင့်အတူဤလက်ရှိလေ့လာမှု၏နှိုင်းယှဉ်အတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုပေးထားခက်ခဲသည်။ အဆိုပါ P300 ၏လေ့လာမှုများ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုဖြစ်ရပ်တစ်ခု related အလားအလာ, နီကိုတင်း၏အသုံးပြုမှုကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူပြပွဲမြင့်မားသောအစီအမံများ , အရက် နှင့် opiates , အစီအမံများမကြာခဏတဏှာညွှန်းကိန်းနှင့်အတူ correlating အတူ။ အဆိုပါ P300 လည်းလေ့အနိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေပစ်မှတ်မကြာခဏ High-ဖြစ်နိုင်ခြေ Non-ပစ်မှတ်နှင့်အတူရောနှောထားတဲ့အတွက် oddball တာဝန်များကိုသုံးပြီးပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်လေ့လာခဲ့သည်။ Meta-analysis သည်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှု-disorders ဘာသာရပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ထိခိုက်မိသားစုဝင်များကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် P300 လွှဲခွင်လျော့နည်းသွားခဲ့ကြောင်းပြသ ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာပြtaskနာများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာဂရုပြုမှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအာရုံစိုက်စေပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် (မူးယစ်ဆေးမဟုတ်သောပစ်မှတ်များ) သို့အာရုံစူးစိုက်မှုအရင်းအမြစ်များချို့တဲ့ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည်။ P300 လွှဲခွင်များကျဆင်းခြင်းသည်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုမမှန်မှုများအတွက် endophenotypic marker လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုကာကိုလာနှင့်ဘိန်းဖြူအချက်များ၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုအာရုံစိုက်သည့်အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလားအလာများကိုလေ့လာခြင်းသည် ERP ၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များကိုထပ်မံတင်ပြသည် (မီလီစက္ကန့် ၃၀၀; နောက်ကျသည့်အလားအလာ၊ LPP) တိုကျရိုကျဒေသမြားတှငျလညျးတငျပွမှုနှငျ့အာရုံစူးစိုက်မှုတိုကျရိုကျ -။ အဆိုပါ LPP နှစ်ဦးစလုံးအစောပိုင်းအာရုံကိုဖမ်းယူထင်ဟပ်ယုံကြည် (400 msec 1000 မှ) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် motivationally သိသိသာသာလှုံ့ဆော်မှုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နေသည်။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များသာယာသောစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှ attenuation တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူလှုံ့ဆော်အာရုံစိုက်မှုများ၏အစောပိုင်းအာရုံကိုဖမ်းများအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်အစောပိုင်း LPP အစီအမံတိုးမြှင်ခဲ့သည်။ သို့သော်နှောင်းပိုင်း LPP အတိုင်းအတာသိသိသာသာကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရှိသူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားသောမ ။ ပစ်မှတ်-related တုံ့ပြန်မှုများအတွက် P300 ဖြစ်ရပ်-related အလားအလာများ၏မီးစက်အဆိုပါ parietal cortex နဲ့ cingulate ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည် . ထို့ကြောင့်ယခင် CSB လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်ပစ္စုပ္ပန် CSB လေ့လာမှုနှင့် P300 လှုပ်ရှားမှုအတွက်နှစ်ဦးစလုံး dACC လှုပ်ရှားမှုအာရုံကိုဖမ်းအလားတူနောက်ခံဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ အလားတူပင်နှစ် ဦး စလုံးလေ့လာမှုများတိုးမြှင့်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူဤအစီအမံများအကြားဆက်စပ်မှုပြသပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် dACC ၏လှုပ်ရှားမှုသည်တပ်မက်မှု၏အညွှန်းကိုထင်ဟပ်စေလိုသောဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်နေသည်၊ သို့သော်စွဲလမ်းမှုကိုမက်လုံးပေးခြင်းနှင့်ထူးခြားသောပုံစံကိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်မဆက်စပ်ပါ။
3) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)
ကောက်နုတ်ချက်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al။ , 2013 (ဆင့်ခေါ်ချက် 303):
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများ၏ဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေကိုတခုတခုအပေါ်မှာ EEG လေ့လာမှု [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကြော reactivity ကိုအစီရင်ခံထားသည်303] ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ images နဲ့ hypersexuality နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏မေးခွန်းလွှာအစီအမံကြည့်ရှုသည့်အခါအဆိုပါလေ့လာမှု ERP amplitude အကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာ hypersexuality မေးခွန်းအပေါ်ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှု၏မရှိခြင်းနိဂုံးချုပ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုသည့်အခါ "ရောဂါဗေဒ hypersexuality ၏မော်ဒယ်များအထောက်အပံ့ပေးရန်ပျက်ကွက်" P300 amplitude ကိုဆိုလိုတာ  (စ။ 10) ။ သို့သော်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းပိုကောင်းနည်းစနစ်အတွက်ပွဲတစ်ပွဲအားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, ဒီလေ့လာမှုတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဘာသာရပ်ရေကူးကန် (7 Non-လိင်ကွဲအပါအဝင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း,) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှစွဲ၏ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ် Cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများတရားဝင်ရလဒ်များကိုရှိသည်ဖို့တသားတည်းဘာသာရပ်များ (အတူတူလိင်, အလားတူအသက်အရွယ်) လိုအပ်သည်။ porn စွဲလေ့လာမှုများမှတိကျသောကြောင့်ကောင်းစွာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း [ဆင်တူအမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှဦးနှောက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ကွာခြားမြဲမြံစွာတည်င့်304, 305, 306] ။ ထို့အပြင်အဆိုပါစိစစ်မေးခွန်းနှစ်ခုစွဲ IP ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အတည်ပြုကြပြီမဟုတ်, နှင့်ဘာသာရပ်များစွဲသို့မဟုတ်စိတ်ဓါတ်များမမှန်၏အခြားသရုပ်များအတွက်ပြမခံခဲ့ရပါ။
ထို့အပြင်စိတ္တဇအတွက်စာရင်းနိဂုံး [ "မဟုတ်ဘဲ disorders ထက် hypersexuality အဖြစ်မြင့်မားတဲ့အလိုဆန္ဒ, နားလည်သဘောပေါက်ဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်"303] (စ။ 1) P300 လွှဲခွင်အဆိုးတနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့အလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်းသောလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်စဉ်းစားရာအရပျထဲကပုံရသည်။ ဟီလ်တန် (2014) တွင်ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့, ဒီတွေ့ရှိချက် [ "တိုက်ရိုက်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒအတိုင်း P300 ၏အနက်ကိုဆန့်ကျင်"307] ။ အဆိုပါဟီလ်တန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနောက်ထပ်တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု၏မရှိခြင်းနှင့် EEG နည်းပညာ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" အကြားခွဲခြားမှုကိုအကြံပြုနှင့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူ" ဟုသံမဏိ et al ဆပ်။ [uninterpretable တွေ့ရှိချက်307].
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စက္ကူ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံများ, မှပိုမိုမြင့်မား P300 လွှဲခွင်) ၏သိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်ဆွေးနွေးအပိုင်းအတွက်အနည်းငယ်မျှသာအာရုံစိုက်မှုပေးထားသည်။ သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အမြင်အာရုံတွေကိုထိတွေ့သည့်အခါပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အင်တာနက်ကိုစွဲနှင့်အတူတစ်ဘုံတွေ့ရှိချက်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးလာ P300 လွှဲခွင်ဆွေမျိုးဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည် [, မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်308]. တကယ်တော့, Voon, et al ။  ဒီကြိုတင်လေ့လာမှုရဲ့ P300 တွေ့ရှိချက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှု၏အပိုင်းတစ်ခုမြှုပ်နှံ။ Voon et al ။ နိဂုံးချုပ်, အထူးသဖြင့်ထူထောင်စွဲမော်ဒယ်များပတ်သတ်ပြီးအတွက်သံမဏိစက္ကူအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမပေး P300 ၏အရေးပါမှု၏ရှင်းပြချက်ကို, ပေး,
ယခင် CSB လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်ပစ္စုပ္ပန် CSB လေ့လာမှုနှင့် P300 လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ "ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံး dACC လှုပ်ရှားမှု အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းယူအလားတူနောက်ခံဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ အလားတူပင်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများတိုးမြှင်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူဤအအစီအမံများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုကိုပြ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ dACC လှုပ်ရှားမှုတဏှာ၏အညွှန်းကိန်းကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအရာ, အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်, ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းတစ်ခုမက်လုံးပေး-salience မော်ဒယ်ပေါ်ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ like နှိပ်နှင့်အတူမပတျသကျဘူးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ " (စ။ 7)
ဤစာရေးဆရာများအနေဖြင့်ဒါ  သူတို့ရဲ့လေ့လာမှု CSB, Voon et al ဖို့စွဲမော်ဒယ်များ၏လျှောက်လွှာကိုချေပပြောဆိုထားသည်။ ဤစာရေးဆရာများတကယ်ကဆိုပါတယ်မော်ဒယ်ထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားပေးကြောင်း posited ။
4) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ကောက်နုတ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း သံမဏိ et al။ , 2013 (ကိုးကား 48):
သံမဏိ et al နေဖြင့်တစ်ဦးက 2013 EEG လေ့လာမှု။ r[သူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိပြဿနာများ၏ဝေဖန်ပြောဆိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှပိုမိုမြင့်မား P300 လွှဲခွင်, eported48] ။ သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အမြင်အာရုံတွေကိုထိတွေ့သည့်အခါပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံးလည်း [ သာ. ကြီးမြတ် P300 လွှဲခွင်ပြ148]. ထို့အပြင်ခုနှစ်, သံမဏိ et al ။ [တနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့ P300 လွှဲခွင်နှင့်အလိုဆန္ဒအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံတင်ပြ48] ။ သံမဏိ et al အစီရင်ခံအဖြစ်ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူတွဲကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းပိုမို cue reactivity ကို။ , အ Voon et al နှင့်အတူ aligns ။ compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက် "အထူးသမိန်းမနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်လျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကို" ၏တွေ့ရှိချက်  ။ ဤတွေ့ရှိချက် supporting "hypersexuals" ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ erectile function ကိုအကဲဖြတ်နှစ်ခုလေ့လာမှုများနှင့် compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် [hypersexuality ၏အစီအမံအကြားအသင်းအဖွဲ့များကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ပူးပေါင်းလိင်နှင့်လိင်အခက်အခဲများဘို့အလိုဆန္ဒလျှော့ချ15,30] ။ ထို့အပြင်ပြီးခဲ့သည့်သုံးလအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးသူကို 2016 ယောက်ျား၏ 434 စစ်တမ်းပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း [arousabilty ၏အဆင့်မြင့်နှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်သော်လည်း, နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆင်းရဲတဲ့ erectile function ကိုခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်44] ။ ဤရလဒ်သည်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းတွေကိုနှင့်မတရားသောမှလိင်စိတ်နိုးထ [အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကျဘာစွဲနှင့် Self-အစီရင်ခံပြဿနာများ၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့တွေ့ပြီသောမျိုးစုံ neuropsychology လေ့လာမှုများ၏အလငျး၌ကြည့်ရှုအားပေးရပါမည်52,53,54,113,115,149,150] ။ အတူတူယူ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများမျိုးစုံနှင့်မတူညီလေ့လာမှုများတစ်ခုမက်လုံးပေး၏ဆွဲဆောင်မှုတန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲမှုများထိခိုက်မခံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသ activation ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူကိုက်ညီသောစွဲလမ်း၏မက်လုံးပေး-salience သီအိုရီ [အတူ align31,106] ။ တက် Sum, ငါတို့အယူအဆနှင့်အတူ alignment ကိုအတွက်အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများညစ်ညမ်းတွေကို, ကြည့်ရှုရန်မတရားသောနှင့် compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆီသို့ သာ. ကြီးမြတ် reactivity ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်မိတ်ဖက်များအတွက်လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုသတင်းပို့ပါ။
5) Emotion မသိနှင့် Non-သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? (2017)
မှတ်ချက်များ YBOP: porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ဒီ 2017 EEG လေ့လာမှု3နီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများထောက်ပြသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာများအားလုံး3Prause EEG လေ့လာမှုများအမှန်တကယ် (မကြာခဏစွဲနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ရသော) မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် desensitization သို့မဟုတ်လေ့တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒီဝေဖန်မှုရှင်းပြ (YBOP အမြဲအခိုင်အမာထားပြီးအတိအကျကဘာလဲ: ၏ဝေဖန်မှု: အယ်ဒီတာ "Prause et al မှပေးစာ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု " 2016).
ဤအ3ကားအညွှန်းအောက်ကကောက်နှုတ်ချက်မှာတော့အောက်ပါနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများ (ညွှန်ပြ#14 ဖြစ်ပါသည် သံမဏိ et al။ , 2013):
14 - သံမဏိ, VR; Staley, C ။ ; ဖုန်၊ ချီးမွမ်း, N ကို။ လိင်ဆန္ဒသည် hypersexuality မဟုတ်ဘဲလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များမှရရှိသော neurophysiological response များနှင့်ဆက်စပ်သည်။ လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု။ အာရုံကြော။ စိတ်ရောဂါ။ 2013, 3, 20770
6) အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) တွင် Neurocognitive ယန္တရားများ.
ခွဲခြားစိတ်ဖြာကောက်နှုတ်ချက် သံမဏိ et alကိုးကားသောအရာ။ , 2013 ( 68):
Klucken နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များမကြာသေးမီက  ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကို (ဆုလာဘ်) ခန့်မှန်း Conditions တွေကို (ရောင်စုံရင်ပြင်) ၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်း amygdala ၏ပြသကျကွီးမွတျ activation မပါဘဲသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နဲ့သင်တန်းသားများကိုလေ့လာသည်။ ဤရလဒ်သည် CSB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကိုကြည့်နှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းနှင့်ယောက်ျားနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြား amygdala activation ဆန်းစစ်သည်အခြားလေ့လာမှုများ [1, 67] ကနေသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဦးEEG, သံမဏိများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကမူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာအမြင်အာရုံမူးယစ်ဆေးတွေကို processing ၏ကြိုတင်သုတေသနနှင့်အတူ resonating, တစ်ဦးချင်းစီ Self-ဖော်ထုတ် CSB နှင့်အတူပြဿနာများရှိခြင်းအဖြစ်အကြား (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဖို့ပိုမိုမြင့်မား P300 လွှဲခွင်ရှုလေ့လာမနာသီချင်းဆို [68, 69] ။
မှတ်ချက်များ YBOP: အထက်ပါကောက်နုတ်ချက်ခုနှစ်တွင်လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်၏စာရေးဆရာများဟုနေကြတယ် သံမဏိ et al ရဲ့ တွေ့ရှိချက်များကိုမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုညွှန်ပြ။ အဆိုပါစွဲမော်ဒယ်နှင့် cue-reactivity ကိုစွဲလမ်းများအတွက် neuro-ဇီဝကမ္မအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အတူဤ aligns ။ စဉ်တွင် သံမဏိ et al။ ဤစကားမှန်သည်မဟုတ်ခြင်း, ဘယ်နေရာမှာမဆိုအစီရင်ခံမဟုတ် - ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနီကိုးလ် Prause အဆိုပါဘာသာရပ်များ '' ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု (ကိုကင်း Prause ကပေးတဲ့ဥပမာကိုကြီး) စွဲ၏အခြားအမျိုးအစားများကနေကွဲပြားကြောင်းပြောဆိုထားသည် သံမဏိ et al။ , 2013
ထို့ပြင်လေ့, 1 [ပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှယုတ်လျော့ဆုလာဘ် sensitivity ကိုတဆင့်ထင်ရှားစေခြင်းငှါများနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှု impact နိုင်ပြီးလိင်ပူးပေါင်း 68]။ လေ့လည်းပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စှဲ [73-79] တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။
မှတ်ချက်များ YBOP: အထက်ပါကောက်နုတ်ချက်၌ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏စာရေးဆရာများရည်ညွှန်းနေကြ သံမဏိ et al ရဲ့ ၏တွေ့ရှိချက် porn ပိုမို cue-reactivity ကို ဆက်စပ်သော တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ (သို့သော်ညစ်ညမ်းမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရန်အနိမ့်အလိုဆန္ဒ) ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေတဲ့အကျင့်၊ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွဲလမ်းမှုတွေပိုရှိသူတွေဟာတကယ့်လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုပိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သော“ မိတ်ဖက်လိင်” အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပါးသည်။ အတူတူဒီနှစ်ခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်တွေကို (porn ပုံရိပ်တွေ) အား သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုညွှန်ပြသော်လည်း, သဘာဝအဆုလာဘ် (ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်) ကိုလျော့နည်း reactivity ကို။ နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးစွဲအန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။
7) အွန်လိုင်း Porn စွဲ: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ Don't-တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019)
ကောက်နုတ်ချက်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al။ , 2013 (ကိုးကား 105 is သံမဏိ et al ။)
အလိုဆန္ဒ signalizing ဒီအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအထောက်အထား prefrontal cortex အထူးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်  နှင့် amygdala [102,103] အကဲဆတ်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ခြင်း။ ထိုအဦးနှောက်ဒေသများတွင် activation ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်များဆင်တူဖြစ်တယ်  နှင့်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသယ်ဆောင်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အဖြစ်တနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့, ဒါပေမယ့်မရညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်လျော့နည်းသွားအလိုဆန္ဒ [ရှိပါတယ်105] စိုက်ထူအရည်အသွေးကွာခြားချက်ကိုလည်းထင်ဟပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခု  ။ ဤသည် desensitization ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျး, သံမဏိရဲ့လေ့လာမှု [(ဘာသာရပ်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော, စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲများအတွက်ပြ၏မရှိခြင်း, တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု၏မရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုမပြုမေးခွန်း၏အသုံးပြုမှုကို) စဉ်းစားရန်အကြိမ်ကြိမ်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုပါရှိသည်106]. Prause နေဖြင့်တစ်ဦးကလေ့လာမှု , တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူဤအချိန်ဤအလွန်တွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူ။ ဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလိင်ကွဲအမျိုးသမီးအတွက် corroborated ပြီ  နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားအနမူနာ .
8) ဘာစွဲ၏ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား (2019)
ကောက်နုတ်ချက်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al။ , 2013:
ပထမဦးစွာသံမဏိ et al ။ (2013) ကြားနေပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာထက်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုသည့်အခါအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (VSS) ၏မြင်ကွင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် P300 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်လွှဲခွင်သွေးဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းရဲ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်သံမဏိရဲ့သုတေသနကိုကိုးကားနိုင်ရန်ပုံမှန်ဘာသာရပ်များကင်းမဲ့သောအယူအဆအတည်ပြုပုံရသည်။ ထို့အပြင် LPP အစိတ်အပိုင်းများသည် P300 ထက်နောက်ကျမည်ဖြစ်သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာသည်သိသာထင်ရှားသည့်ပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဆန္ဒကိုပိုမိုရောင်ပြန်ဟပ်သည် (Hilton, 2014) (လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒရှိလေလေ LPP မတည်ငြိမ်မှုများလေလေဖြစ်သည်) ။ ဤကိစ်စတှငျ Prause နှင့် သံမဏိ et al ။ (2015) တိုးတက်မှုစမ်းသပ်မှုအတွက် VSS တစ် ဦး ချင်းစီမှလျော့နည်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုသူတစ် ဦး ချင်းစီကဆက်ပြောသည်နှင့် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအလွန်အမင်းကြည့်ပြီးလိင်ဆန္ဒကိုပိုမိုတင်ပြသောဘာသာရပ်များသည်လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ LPP amplitude သည်သေးငယ်သောကြောင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသဲလွန်စများကတပ်မက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအတွေးနှင့်ဆန့်ကျင်နေပုံရသည်။ တကယ်တော့၊ ပညာရှင်အချို့က Prause နှင့် Steele တို့၏လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသောလိင်အင်္ဂါရုပ်ပုံများသည်သူ့အားစွဲလမ်းစေနိုင်သည်ဟုထောက်ပြခဲ့ကြသည်။ စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများ, မစွဲလမ်းများ (Gola et al, 2017; ။ Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse, 2016) ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်ပါဝင်သောသီအိုရီ (IST) ၏သီအိုရီအရစွဲလမ်းမှု၏အတိုင်းအတာသည်တိုးများလာသည်နှင့်အမျှစွဲလမ်းမှုသည်စွဲစွဲသူများ၏စွဲလမ်းလိုသောဆန္ဒများကိုပိုမိုစွဲလမ်းစေနိုင်သည်။ (Berridge, 2012; Robinson, Fischer, Ahuja, Lesser, & Maniates, 2015)၊ သို့သော်စွဲစွဲသူများ၏စွဲလမ်းမှုမှာတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပြီး LPP ၏ကျယ်ပြန့်မှုကျဆင်းခြင်းသည် CA သည်မူးယစ်ဆေးစွဲနေကြောင်းဖော်ပြသည်။